တဈယောကျထကျပိုခငျြတယျ - Owl Myanmar News
ဒီနကေ့ ခဈြသူမြားနမေို့ လမျးပြျောမှာ လူတှကေိုလဲ အတျောကိုရှုပျရှပျခကျကာနသေညျ။ ကြှနျတျောကတော့ လမျးထိပျ တဈနရောကနပေဲ ခဈြသူလေး နှယျ ထှကျအလာကို စောငျ့နခေဲ့သညျ။ နှယျက ကြောငျးပွီး ခါစမို့ အလုပျခှငျထဲဝငျကာ အလုပျလုပျနပွေီဖွဈသညျ။ ထိုကပဲ အစပွုခဲ့တယျလို့ချေါမလား ကြှနျတျောနဲ့ နှယျမှာ ဆနျးပွားတဲ့အခဈြတဈခုကို စတငျထိတှမေိ့သှားသညျ။ နှယျက ကြောငျးတတျနစေဉျ ကာလတဈလြောကျလုံးမှာ ရိုးရိုးယဉျယဉျလေးသာ ဝတျတတျစားတတျသျောလညျး အလုပျထဲရောကျတော့ ကောကျကွောငျးမြား ထငျးထငျးပျေါသော သူမတို့ရုံးရဲ့ ယူနီဖောငျး ကို ဝတျဆငျရတော့သညျ။ သူမ ကြောငျးတတျနစေဉျက သူမရဲ့ မွနျမာဆနျဆနျ အင်ျကြီလေး ရငျဟိုကျနရေငျပငျ သဝနျတိုတတျတဲ့ ကြှနျတျော ခုတော့ သူရဲ့ရုံးအဝတျအစားနဲ့ ပုံစံလေးကို ရငျခုနျကာနတေတျခဲ့ပွီး ။ ကြှနျတျောနဲ့ နှယျက အခဈြကို တနျဖိုးထားတတျ သူတှမေို့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အရူးမူးကို ခဈြခဲ့ကွသညျ။
ဒါကွောငျ့လဲ ကြှနျတျောတို့ ခဈြသူ သကျတမျး နှဈနှဈပွညျ့ခါနီးမှာပဲ အတူတူနကွော စညျးကြျောခဲ့ကွသညျ။ နှယျက လှယျလှယျကူကူနှငျ့တော့ လကျခံခဲ့သညျမဟုတျ သူမနှငျ့ ကြှနျတျောရဲ့ အခဈြတှကေို အပွညျ့အဝ ယုံကွညျခဲ့လို့သာ လကျခံခဲ့ကွခွငျးဖွဈသညျ။ ရိုးရိုး အေးအေး နတေတျတဲ့ သူမနှငျ့ အတူတူနရေတာလဲ ကလေးကို မုနျ့ပေးကွိုကျရသလို အားလုံးကို သငျပွကာနရေသညျ။ ထိုအခကျြကလဲ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ကံကောငျးသလိုလို။ “ကို စောငျ့နရေတာ ကွာပွီလား နှယျကရခြေိုးတာနညျးနညျး နောကျကသြှားတယျ” ကြှနျတျော စောငျ့နစေဉျမှာပဲ နှယျတဈယောကျ ကြှနျတျောရှိတဲ့ နားသို့ ရောကျလာသညျ။ “မကွာသေးပါဘူးကှ ကိုလဲ စောစောလေးကမှ ရောကျတာ” ကြှနျတျောစကားပွောကာပွုံးပွရငျး နှယျကို သခြောကွညျ့လိုကျမိသညျ။ ကြှနျတျောရဲ့ အလှပဂေးလေးနှယျ ဒီနအေ့ရမျးကို ဆကျဆီဈ ဖွဈလှသညျ။ ကြောငျးတတျနတေုနျးကနှယျနဲ့ ခုနှယျနဲ့ သွျော တဈခွားသူကို ပွောပွရငျ ယုံပါ့မလားနှယျရယျ။ နှယျက ဒေါကျဖနပျအမွငျ့လေးနဲ့မို့ နှယျရဲ့ တငျသားမြား ပငျထငျထားသလိုဖွဈကာ အရငျကထကျပိုကာ ကားထှကျနသေညျ။
အင်ျကြီကတော့ ပေါငျလညျလောကျထိရောကျတဲ့ အသားကပျအရညျလေးနဲ့ ကြှနျတျောစှဲလမျးရတဲ့အပွုံးလေးကို ပွုံးလို့ တခွားသူမြားမွငျရငျ ကြှနျတျောရဲ့နှယျကို မငေးပဲ နမှောမဟုတျဘူးလေ။ “ကိုတို့ ဘယျသှားကွမလဲ နှယျ ” “ခုခဏလေး ဈေးဝယျထှကျမယျ ထှကျမယျ မုနျ့စားမယျ ပွီးရငျတော့ ကို့သဘော ” မခြိပွုံးလေးပွုံးပွတဲ့နှယျကို ကြှနျတျော ကိုကျစားခငျြစိတျပါပေါကျသှားသညျ။ ကြှနျတျောလညျး နှယျလကျကို တှဲကား နှယျလိုအပျတာလေးမြားကို လိုကျဝယျပေးရငျး ဘေးကိုလညျး တဈခကျြတဈခကျြ လိုကွညျ့မိသညျ။ အတှဲတျောတျောမြားမြားရဲ့ ကောငျးလေးတှကေ နှယျ့ကို လိုကျမကွညျ့သူမရှိလောကျအောငျပငျ။ ကြှနျတျောနဲ့နှယျလဲ လုပျစရာရှိတာတှလေုပျပွီး အရငျနထေဲ့က ကွိုယူထားသော ဟိုတယျသို့ ချေါခဲ့လိုကျသညျ။ အခနျးထဲရောကျတာ နဲ့ ဘယျလိုမှ မနနေိုငျတော့ဘဲ နှယျ့ကို ဖကျကာ နောကျမှနပွေီး စကားကပျပွောလိုကျသညျ။ “နှယျ ကုတငျပျေါကို လကျထောကျပွီး ကုနျးလိုကျ” နှယျက ကြှနျတေျာ့ကို မကျြစောငျးလေးထိုးကာ ကွညျ့ပွီး ကုတငျပျေါကို လကျထောကျကာ ကုနျးလိုကျသညျ။ ကြှနျတျောလဲ မသေကျနှယျနောကျမှာ ဒူးထောကျလိုကျပွီး မသေကျနှယျ အင်ျကြီလေးကို ခါးထိလှနျတငျလိုကျသညျ။
အောကျတှငျတော့ ပငျတီ လေးနဲ့ လုံးဝနျးနသေော အိုးလေးက အသငျ့ရှိနသေညျ။ ပငျတီ လေးကို ဒူးလောကျထိ ခြှတျခပြွီးမှ အိုးလေးကိုဖွဲကာ အရညျလေးမြားစိမျ့ထှကျနသေော စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးကို ယကျပေးလိုကျသညျ။ နှယျတဈခကျြတှနျ့သှားပွီးမှာ အိုးကို အရငျကထကျပို ကောကျပေးလာသညျ။ “အငျး… အငျး….” စောကျရညျ နံလေးသငျးပွီး ဆကျဆီဈ ကနြသေော နှယျ့ကွောငျ့ ကြှနျတေျာ့လီးက ဘောငျးဘီးအတှငျးမှာ တငျးတောငျကာ နသေညျ။ ကြှနျတျောလဲ နှယျ စောကျဖုတျလေးကို ယကျပေးလိုကျ စောကျစိလေးကို ရှာနဲ့ ထိုးမှလေိုကျနှငျ့ လြှာစှမျးပွပေးလိုကျသညျ။ ထိုခြိနျ ကြှနျတေျာ့ဘောငျးဘီ အိတျကပျထဲက ဖုနျးက ထမွညျလာသညျ။ “ရောကျနပွေီလား တတျခဲ့လိုကျလေ ကြှနျတျောက ဒုထိယထပျက အခနျး ၂၀၃ မှာ ” ဖုနျးပွောအပွီး နှယျ့စောကျဖုတျလေးကို ပွနျအယကျမှာ စောစောကထကျပိုပွီး အရညျမြားပိုစိမျ့နသေညျ။ ဒါကို သိသှားတဲ့နှယျက ပေါကျနှဈခြောငျးကိုလိမျကာ စောကျဖုတျလေးကို ယကျမရတော့အောငျ လုပျလိုကျသညျ။ ကြှနျတျောလဲ နှယျခါးလေးကို ကိုငျကာ နှိပျ့ခလြိုကျပွီးမှ နောကျသို့ ပွူးထှကျလာသော စောကျဖုတျးလေးကို ပွနျယကျလိုကျသညျ။
“ဒေါကျ ဒေါကျ ဒေါကျ” “ဝငျခဲ့အကိုရေ ပွီးရငျတော့ လော့ ခလြိုကျ” ကြှနျတျောစကားမဆုံးခငျမှာပဲ အသားညိုညို ထောငျထောငျမောငျးမောငျးနှငျ့ လူတဈယောကျ အခနျးထဲသို့ ဝငျလာသညျ။ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျကိုကွညျ့ပွီး ပွုံးနသေော သူ့ကို “အကိုပါ ဝငျနှဲလိုကျတော့လေ” လို့ပွောပွီး နှယျစောကျဖုတျကို ပွနျယကျနလေိုကျသညျ။ ကြှနျတေျာ့လီးရော နထငျသှေးတှရေော တဈဒုတျဒုတျနှငျ့ စီးဆငျးနပွေီဖွဈသညျ။ နှယျကတော့ ကုတငျပျေါတှငျ မကျြနာကို အပျထားသညျ။ ဖဘှေ့တျအကောငျ့နာမညျ အရ အောငျကွီး ဆိုသူက ကြှနျတျောစကား ကွားပွီသညျနှငျ့ သူရဲ့ဘောငျးဘီခပျပှပှကို ခြှတျလိုကျပွီး အပျေါကတော့ တီရှပျ အင်ျကြီလေး ကနျြနသေေးသညျ။ ပွီးမှ နှယျ့ရှကေို့ သှားကာ သူရဲ့ ဂျေါလီလီးမဲမဲကွီးကို နှယျနှုတျခမျးနှငျ့ တပေ့ေးလိုကျသညျ။ နှယျက ရုနျးမလို ဟနျပွငျခြိနျတှငျ ကိုအောငျကွီးက ခေါငျးကိုကိုငျကာထိနျးပေးလိုကျသညျ။ နှယျနဲ့ ကြှနျတျော တူတူနတေဲ့သကျတမျးကွာလာသညျနှငျ့အမြှ အသဈအဆနျးမြားကို စိတျဝငျစားလာခဲ့ကွသညျ။ ကြှနျတျောကအရငျထဲက ကပျကိုးဆိုသော အမှောငျစိတျအပျေါကို စှဲလမျးခဲ့သညျ။ နှယျနဲ့တှတေ့ော့ ထိုအရာက ပြောကျသှားပွီဟုထငျတာ တကယျတော့မပြောကျ ကြှနျတေျာ့ရဲ့မသိစိတျထဲမှာ ထိုအရာကို စှဲလမျးနသေေးသညျ။
နောကျပိုငျး နှယျနှငျ့ တူတူနလောပွီးတဲ့နောကျ နှယျကို ပွောငျးလဲကာ ပေးလိုကျမိသညျပုံမှာ (ဟော့ဝိုကျဈ) ပုံစံဖွဈနပွေီဆိုတာ နောကျမှသတိထားမိသညျ။ ထိုခြိနျမှ စပွီးစညျးရုံးခဲ့တာ ဒီနကေ့ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျရဲ့ ပထမဆုံး အတှအေ့ကွုံဖွဈသညျ။ ကြှနျတျောစောကျဖုတျ ယကျရငျး အတှေးလှနျသှားရာမှ ပွနျသထိထားမိခြိနျတှငျ နှယျက ကိုအောငျကွီးလီးကို အငမျးမရ စုပျပေးနပွေီဖွဈသညျ။ နှယျက ပေါငျလေးကို အရငျကထှကျပိုကားလာပွီး စောကျဖုတျလေးမှာလဲ ပှစိပှစိဖွဈလာပွီဖွဈသညျ။ ကြှနျတျောက စောကျဖုတျယကျတာကို ရပျလိုကျခြိနျတှငျတော့ ကိုအောငျကွီးက ကုတငျပျေါက ဆငျးလာပွီး နှယျနောကျတှငျ နရောဝငျယူလိုကျသညျ။ နှယျကတော့ စောစောက လီးစုပျပေးနသေညျမှာ သူမ မဟုတျတဲ့အတိုငျး ခေါငျးကို မှယေ့ာနှငျ့ကပျကာ ငုံ့နသေညျ။ “ဖွနျး…… ဖွနျး….” “အာ့…….. အာ့…………” ကိုအောငျကွီးက နှယျနောကျမှနရောယူပွီး အိုးလေးနှဈဖကျကို တဈဖကျတဈခကျြရိုကျကာ နှယျစောကျစိလေးကို လကျနှငျ့ ပှတျပေးလိုကျသညျ။ ပွီးမှ တောငျထနသေော ဂျေါလီ အဖူးအဖူးမြားနှငျ့ လီးကွီးကို နှယျ စောကျဖုတျလေးထဲကို တဖွညျးဖွညျး ထညျ့သှငျးလိုကျသညျ။
ကြှနျတျောလဲ ခကျြခငျြးဘဲ ဘောငျးဘီထဲမှ ဖုနျးကို ထုတျကာ ဗီဒရို ရိုကျလိုကျသညျ။ နှယျကတော့ အိပျ့ယာခငျးမြားကို စုပျကိုငျရငျး ခေါငျးထောငျကာ ညညျးလိုကျရသညျ။ ကိုအောငျကွီးက လီးအဆုံးထိသှငျးပွီးမှ ဘာမှဆကျမလုပျဘဲ နှယျစောကျဖုတျလေးကို လကျနှိုကျကာ အစိလေးအား ပှတျပေးလိုကျသညျ။ နှယျကတော့ လီးတဈခြောငျးလုံးဝငျပွီး အစိပှတျခံရတဲ့ဖီလျးကတော့ ဘယျလိုရယျမသိ ကြှနျတျောမှာတော့ ကွကျသီးမှေးတှတေောငျ ထသှားသညျ။ နှယျစောကျဖုတျလေး အရငျကထကျအရညျထှကျလာမှ နောကျမှ တဈခကျြခငျြးစောငျ့ကာလိုးတော့သညျ။ နှယျကတော့ လီးအရသာ အသဈကိုခံစားရငျး ညညျးသံမြားက အသဲခိုကျလှသညျ။ “အား…. အား….. အား…” “ဗွဈ…ဗွဈ…. ဗွဈ…. ဗွဈ…” ဒီတိုငျးလိုငျးရငျ အသံမထှကျသော နှယျ စောကျဖုတျလေးမှာ ဂျေါလီတှပေါနသေော လီးမဲမဲကွီးကောငျ အသံတှအေစိအရီထှကျလာသညျ။ ကြှနျတျောလဲ ကိုအောငျကွီးလိုးနသေော နရောနောကျမှနပွေီး နှယျ စောကျဖုတျလေးထဲသို့ လီးဝငျထှကျနပေုံမြားကို မှတျတမျးယူငါလိုကျရိုကျနလေိုကျသညျ။ ကိုအောငျကွီးက နှယျအင်ျကြီလေးကို ကြောမှဇဈဖွုတျပွီး အောကျသို့ဆှဲခလြိုကျသညျ။ ဘျောလီမဝတျဘဲ တငျးရငျးနသေော နှယျနို့လေးမြားက ခကျြခငျြး ခုနျထှကျလာသညျ။ နောကျမှ ကပျလိုးရငျး နို့သီးခေါငျးလေးမြားကို လှမျးကာခပြေေးနသေညျ။
“အား…. အား….. အား…” “ကို မကျြနာမရိုကျနဲ့လေ….. အား…အား…” “နောကျကရြငျ ပွနျကွညျ့ရအောငျလို့ကာကှ” နှယျကခေါငျးကို ကုတငျနှငျ့အပျခါရှောငျသျောလညျး ကိုအောငျကွီးက နှယျကို ဆံပငျဆဲပွီးနောကျမှ လိုးလိုကျသောကွောငျ့ ခေါငျးမော့ လာရသညျ။ နှယျမှာ ကာမစိတျမြားတတျကာ မှနျနပွေီးမှာ မကျြနာတဈခုလုံး ရဲတတျကာနသေညျ။ ထိုနောကျမှာ ကိုအောငျကွီးက လီးကို စောကျဖုတျထဲက ခြှတျလိုကျပွီး ကုတငျပျေါတတျကာအိပျ့လိုကျသညျ။ ကြှနျတျောလဲ ကငျမရာ ကို မှတျတငျခုံပျေါတှငျ တငျကာ သူတို့လိုးနပေုံမြားကို ရိုကျရငျး ဘောငျးဘီကို ခြှတျပွဈလိုကျသညျ။ မခြှတျလို့လဲမရ ကိုအောငျကွီးနှငျ့ နှယျ လိုးပုံမြားကိုကွညျ့ရငျး လီးက အသာကုနျတောငျနသေောကွောငျ့ နာလာသညျ။ ပွှတျ…. ပွှတျ…… ပွှတျ…… ပွှတျ….. နှယျက ကိုအောငျကွီးပျေါသို့မတတျဘဲ ဘေးမှကုနျးကာ လီးကို စုပျနခွေငျးဖွဈသညျ။ ကိုအောငျကွီးကလဲ မသေကျနှယျခေါငျးကို ထိနျးကာ အောငျမှကော့ကော့ပေးနသေညျ။ ကြှနျတျောပွောငျးလဲပေးခဲ့တဲ့နှယျလေးမှာ ရိုးရိုးယဉျယဉျလေးမှ ခုတော့ ဘယျသူမှ လိုကျမမှီတဲ့ (ဟော့ဝိုကျ) ဖွဈနခေပြွေီ။ ခဏအကွာမှ နှယျက ကိုအောငျကွီးပျေါသို့တတျကာ လီးကို သူမလိုကျနှငျ့ကိုငျပွီး စောကျဖုတျထဲသို့ ထညျ့ကာ ထိုငျခလြိုကျသညျ။ ပွီးမှ ကိုအောငျကွီးအပျေါသို့ လကျထောကျကာ ဆောငျ့လိုးတော့သညျ။
အား…. အား… အား.. ဗွဈ… ဗွဈ….ဗွဈ…ဗွဈ..ဗွဈ…. .. ဖွနျး….. ဖွနျး….. နှယျလေးနောကျမှနပွေီး ကြှနျတျောလဲ ဗီဒရို ရိုကျရငျး ထုရတော့သညျ။ ကိုအောငျကွီးက နှယျလေးအရှိနျကသြှားသညျနှငျ့ ဖငျလုံးကွီး နှဈဖကျကို ရိုကျကာ အရှိနျတငျကာ လိုးခိုငျးသညျ။ နှယျကတော့ ကိုအောငျကွီးရိုကျလိုကျတိုငျး ပိုအိကာဆောငျ့လိုးသညျ။ ကိုအောငျကွီးက နှယျနို့သီးခေါငျးလေးမြားကိုလညျး အနားမနရေအောင ခနြေနေသေညျ။ ခုမှ တကယျ့ ကြှနျတေျာ့ဖာသညျမလေး နှယျဖွဈတော့တာဟု တှေးလိုကျမသညျ။ ကြှနျတျောလဲ ဗီဒရို ရိုကျရငျး ဘယျလိုမှ မထိနျးနိုငျတော့ဘဲ နှယျ့အိုးလေးပျေါတှငျ လရညျမြားကို ထုခကြာ ပွီးလိုကျတော့သညျ။ နှယျလဲ ကိုအောငျကွီး ပျေါတှငျ အဆကျမပကျြဆောငျ့ကာ လီးအဖြားထိ ထုတျကာ ဆောငျ့ရငျး လီးနဲ့ စောကျဖုတျ ကြှတျသှားသောခြိနျတှငျ နှယျလေးပွီးသှားသညျ။ စောကျဖုတျထဲမှ လီးကြှတျသှားခြိနျတှငျ ပွီးသှားသောကွောငျ့ နှယျစောကျဖုတျလေးကို အတိုငျးသားမွငျနရေသညျ။ နှယျစောကျဖုတျလေးမှာ အရငျလိုမဟုတျတော့ဘဲ အတှငျးသားမြားပျေါနပွေီး စောကျဖုတျလေးမှာလဲ အခေါငျးပေါကျလေး ဖွဈကာနသေညျ။
ထိုအခေါငျးပေါကျနှငျ့ စောကျဖုတျလေး ညှဈကာညှဈကာ ပွီးနပေုံမှာ ကြှနျတေျာ့လီးပငျ ပွနျတောငျလာသညျ။ ခဏကွာပွီးမှာ နှယျကို ကုတငျပျေါသို့လညျးခလြိုကျပွီး နှယျ့ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို တမျးကာအပျေါမှ စောငျ့လို့းလိုကျသညျ။ ကိုအောငျကွီးလိုးခကျြမြားမှာ လဲ အကွမျးဆုံးဖွဈပွီး နှယျရဲ့ ငယျသံပါအောငျအျောပုံမှာလဲ အကယျြဆုံးဖွဈသညျ။ အခကျြပေါငျးတျောတျောမြားမြား လိုးပွီးမှ နှယျ့စောကျဖုတျလေးထဲသို့ ဆောငျ့ဆောငျ့ထညျကာ လရညျမြားကို ပနျးထညျ့လိုကျသညျ။ ပွီးမှလီးကို နှုတျလိုကျခြိနျတှငျ နှယျစောကျဖုတျထဲမှ လရညျမြား အံကာရှုနျထှကျလာပွီး နှယျလေးလဲ ဖုတျလိုကျဖုတျလိုကျနှငျ့ ဖလပျပွသှားသညျ။ ကြှနျတျောနဲ့ကိုအောငျကွီးလဲ နှယျလေးရဲ့ တဈဖကျတခကျြတှငျ ဝငျကာအိပျ့လိုကျသညျ။ “ဘယျလိုလဲ ညီလေး အဆငျပွရေဲ့လား…..” “သိပျ့ပွတောပေါ့အကိုရာ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျရဲ့ပထမဆုံး အတှအေကွုံကတော့အားအရဆုံးပဲ” “ဟား….. ဟား….” “ငါ့ညီလိုအပျသေးရငျ အပွငျမှာ နှဈယောကျကနျြသေးတယျ ဘယျလိုလဲ” “နှယျလေး အဆငျပွရေငျ ကြှနျတျောကတော့ပိုကွိုကျတာပေါ့ဗြာ” “ဘယျလိုလဲ နှယျလေး အကိုထပျချေါပေးရမလား” “ဒီနတေ့ဈနလေုံ့းကတော့ အဆုံးစှနျဆုံးထိ သှားခငျြတယျ ချေါလိုကျလေ…… ဒါပမေဲ့ခဏနျော နှယျသနျ့ရှငျးရေးလုပျလိုကျဦးမယျ” “အိုကေ လေ အတာဆို အကိုခဏ အောကျဆငျးလိုကျဦးမယျ” ကိုအောငျကွီးက ပွောပွီးသညျနှငျ့ အဝတျအစားမြားဝတျကာ အောကျသို့ဆငျးသှားသညျ။
ကြှနျတျောကတော့ နှယျလေးအင်ျကြီတှကေို အကုနျခြှတျပေးလိုကျပွီး နှယျလေးရဲ့ ကိုအောငျကွီးလိုးထားသော စောကျဖုတျလေးကို ယကျလိုကျသညျ။ တဈခွားတဈယောကျရဲ့ လရညျနံ့မြားလှိုငျထနသေော ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့စောကျဖုတျလေးကို ယကျရသညျမှာ (ကပျကိုး)ကမ်ဘာမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈသညျ။ ပွီးမှရခြေိုးခနျးထဲဝငျကာ နှယျကို သနျစငျပေးရငျး နှဈယောကျတူတူနခြေိုးလိုကျကွသညျ။ ကိုအောငျကွီးနှငျ့ သူ့လူနှဈယောကျ နာရီဝကျခနျ့အကွာတှငျ ပွနျရောကျလာသညျ။ နှဈယောကျလုံးက ကိုအောငျကွီး လိုပငျ အသားညိုညို ခပျတောငျ့တောငျ့တှခေညျြးဖွဈသညျ။ “ဆောရီး ညီ ကိုတို့တဈခှကျတဈဖလားလောကျ ခနြလေို့” “ရပါတယျအကိုရဲ့ အဆငျပွပေါတယျ” နှယျက ရခြေိုးတဈဘကျလေးကို ပတျပွီး ရခြေိုးခနျးထဲကထှကျလာခြိနျတှငျ ကိုအောငျကွီးလူနှဈယောကျမှာ စားမတတျဝါးမတတျ နှယျအားကွညျ့ကွသညျ။ “အကိုမိတျဆကျပေးရဦးမယျ သူတို့ကအကိုရဲ့ စိတျတူကိုယျတူ သူငယျခငျြး တှေ ဒီကောငျက မိုးကွီးတဲ့ ဒီကောငျကတော့ ဇျောကွီးတဲ့ နာမညျအရငျးတှကေတော့မလိုအပျဘူးထငျတယျ ဟုတျတယျမို့လား” ကိုအောငျကွီးက မိုးကွီးဆိုတဲ့အရပျခပျပကျြပကျြတဈယောကျ ဇျောကွီးဆိုတဲ့ ကိုအောငျကွီးနဲ့ မိုးကွီးလောကျ အသားမညိုတဲ့တဈယောကျနှငျမိတျဆကျပေးသညျ။
ကြှနျတျောနဲ့နှယျလဲ ခေါငျးပဲညိမျ့ပွလိုကျသညျ။ “ညီလေး… အကို နှယျ့ကို ဆေးတဈမြိုးတိုကျခငျြတယျ သူ့အတှကျအဆငျပွအေောငျလို့ပါ ဘယျလိုလဲ” ကိုအောငျကွီးက ကြှနျတျောပုခုံးကိုလာဖကျပွီးပွောသညျ။ “လူကို အန်တရာယျ မရှိဘူးဆိုရငျတော့ ရပါတယျ ” “အိုကေ အတာဆိုလဲ စလိုကျကွရအောငျ ” ကိုအောငျကွီးက သူတို့ပါလာသောအိတျထဲက အရကျပုလငျးလိုအရာထဲကရနှေငျ့ ဆေးလုံးတဈလုံးတိုကျလိုကျသညျ။ပွီးမှ ကိုအောငျကွီးတို့က ထိုပုလငျးထဲကအရညျကို သုံးယောကျမြှသောကျကွသညျ။ နှယျကတော့ဆေးသောကျပွီး ကြှနျတေျာ့ပျေါတတျထိုငျနသေညျ။ ကြှနျတျောလဲ နှယျပေါငျလေးအားပှတျပေးနလေိုကျသညျ။ ကိုအောငျကွီးတို့အဖှဲ့က လုပျစရာရှိတာလုပျပွီးသညျနှငျ့ တကိုယျလုံး ခြှတျကာ သူတို့ရဲ့ ဂျေါလီလီးကွီးတှကေို ထလာစရေနျ ဂှငျစတိုကျကွသညျ။ သူတို့အားလုံး တူညီတာကတော့ လီးကွီးတှကေမဲနပွေီး အားလုံး ဂျေါလီတှနှေငျကွီးဖွဈသညျ။ နှယျ တဈယောကျ သူတို့ လီးကွီးတှကေိုကွညျ့ပွီး ပေါငျနှဈဖကျကိုလိမျကဈြကာ ကာမစိတျမြားတတျလာသညျ။ သခြောတာကတော့ ဆေးစှမျးရောလူစှမျးရောပွ ပွီထငျသညျ။ မသေကျနှယျက ကြှနျတေျာ့ပေါငျပျေါကဆငျးသှားပွီး ထိုလူသုံးယောကျနားသှားကာ လီးကွီးတှကေိုအငမျးမရ စုပျတော့သညျ။ ကြှနျတျောလဲနောကျတဈကွိမျ ဖုနျးကို ထုတျကာ ဗီဒရို စတငျရိုကျလိုကျသညျ။ “ကောငျးလိုကျတဲ့စုပျခကျြတှကော ကဈြ” မိုးကွီးဆိုသူရဲ့ လီးကွီးကို အငမျးမရစုပျကာ အောငျကွီးနှငျ့ ဇျောကွီးလီးကိုလညျးပိုငျကာစှပေးနသေညျ။
ကြှနျတျောနှယျနောကျကိုသှားကာ စောကျဖုတျလေးကို အနီးကပျရိုကျလိုကျခြိနျတှငျ နှယျစောကျဖုတျထဲမှစောကျရညျမြားလြှံထှကျကာနသေညျ။ နှယျကတဈခြောငျးပွီးတဈခြောငျ ဆကျတိုကျစုပျနသေညျ။ “ငါမရတော့ဘူးကှာ ခခြငျြနပွေီ” ကိုဇျောကွီးက ပွောပွောဆို နှယျ့ကို မတျတပျရပျကုနျးခိုကျးကာ နောကျမှနပွေီး စလိုးတော့သညျ။ ကိုဇျောကွီးကလိုးသညျနှငျ့ အခကျြမှမနားဘဲ ဆကျတိုကျ နှယျစောကျဖုတျလေးကို ဖှာထှကျသှားအောငျ ဆောငျ့လိုးတော့သညျ။ နှယျကတော့ ဖီးတတျနသေောပုံနှငျ့ ရှကေ့လီးနှဈခြောငျးကိုလညျး အစုပျမပကျြဘဲညညျးနသေညျ။ ကိုဇျောကွီးက အတျောမောသှားမှအရှိနျရှော့ပွီး နှယျ့ စအိုလေးအား လကျတဈခြောငျးထညျ့ကာ စမှသေညျ။ နှယျမှာ ကြှနျတျောနှငျ့လိုးစဉျထဲက ဖငျလိုးထားသောကွောငျ့ သိပျ့တော့မမှု့ပေ။ သို့သျော ဂျေါလီလီးနှငျ့လိုးလြှငျဖငျကှဲမညျကတော့ သခြောသညျ။
“အငျး… အငျး…. အငျး…” “မငျးအဆငျသငျ့ဖွဈပွီလား” မိုးကွီးက ဇျောကွီးကိုမေးလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ “အတှကွေုံ့ရှိပွီသားကှ အေးဆေးပဲ” “အတာဆို စလိုကျကွရအောငျလေ” မိုးကွီးနှငျ့ ဇျောကွီး အတိုငျဖောကျညီညီပွောဆိုပွီး မိုးကွီးက ကုတငျပျေါလို့ ပကျလကျလှနျအိပျ့လိုကျသညျ။ ဇျောကွီးကလဲ နှယျစောကျစောကျဖုတျထဲမှလီးကိုနှုတျကာ မိုးကွီးပျေါကိုတတျလိုးရနျပွောလိုကျသညျ။ နှယျက မိုးကွီးလီးကို ကိုယျတိုငျကိုငျကာ ဆောငျ့လိုးလိုကျသညျ။ အရငျကနှယျနှငျ့တခွားစီ ကာမခံစားမှုကို သာသိသော နှယျဖွဈနခွေပွေီး ကြှနျတေျာ့ခဈြသူလေးကို လူထှားကွီးသုံးယောကျဝိုငျးဖွုတျနပေုံကိုကွညျ့ရငျး လီးထိပျ့မှ အရညျကွညျလေးမြားစုလာသညျ။ ထိုနောကျမှ ဇျောကွီးက အသငျ့ယူလာသော ခယျြဘူးဖွငျ့ သူ့လီးကွီးကိုလိမျးပွီး နှယျ့စအိုဝလေးကိုလညျးသုတျလိမျးပေးလိုကျသညျ။ ပွီးမှာနှယျအိုးကိုကိုငျကာထိနျးလိုကျပွိး လီးကွီးကို ဖငျပေါကျလေးထဲသို့ ဖိကာ ထညျ့သှငျးလိုကျသညျ။
ဒီတခါတှငျတော့ နှယျအျောရတော့သညျ။ မိုးကွီးက အောကျကနပွေီ နှယျနို့သီးလေးမြားကို ခပြေေးလိုကျသညျ။ နှယျတဈယောကျ မကျြရညျမြားပငျ ကလြာသညျ။ တခွားယောကျြားကွီးနှဈယောကျက နှယျအားလိုးနပေုံကိုကွညျ့ရငျ လရညျမြားပငျထှကျခငျြလာသညျ။ ခဏကွာတော့ နှယျတို့သုံးသောကျ စီခကျြညီ အတိုငျဖောကျညီလာကွသညျ။ ထိုခြိနျမှ ကိုအောငျကွီးက ကုတငျပျေါတတျသှားပွီး နှယျပါးစပျပေးကို စတငျကာလိုးတော့သညျ။ အခနျးတဈခနျးလုံး လိုးသံတှကေ ဆူညံနပွေီး လီးနှငျ့စောကျဖုတျရိုကျသံတှေ လဥနှငျဖငျရိုကျသံတှေ လညျခြောငျးထဲက ညညျးသံတှကွေောငျ့ ကြှနျတေျာ့လီးမှလရညျမြား သူ့အလိုလို အားပွငျးမာနျပွငျး ထှကျကွလာတော့သညျ။ မသေကျနှယျ (ကြှနျတျောရဲ့နှယျ) ဘယျခြိနျထိ ထိုအသံတှနေဲ့ ဆူညံနဦေးမယျမသိ။ ကြှနျတျောကြှေးတဲ့ ခြောကလပျခြောငျးတှေ သူမတဈဘဝလုံးမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈနမှော သခြောနပွေီ။ ကြှနျတေျာ့လီးထိပျမှာက လရညျတှေ တသငျသှငျစီးရငျးပေါ့။ ပွီးပါပွီ….။
ဒီနေ့က ချစ်သူများနေမို့ လမ်းပျော်မှာ လူတွေကိုလဲ အတော်ကိုရှုပ်ရှပ်ခက်ကာနေသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ လမ်းထိပ် တစ်နေရာကနေပဲ ချစ်သူလေး နွယ် ထွက်အလာကို စောင့်နေခဲ့သည်။ နွယ်က ကျောင်းပြီး ခါစမို့ အလုပ်ခွင်ထဲဝင်ကာ အလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ထိုကပဲ အစပြုခဲ့တယ်လို့ခေါ်မလား ကျွန်တော်နဲ့ နွယ်မှာ ဆန်းပြားတဲ့အချစ်တစ်ခုကို စတင်ထိတွေ့မိသွားသည်။ နွယ်က ကျောင်းတတ်နေစဉ် ကာလတစ်လျောက်လုံးမှာ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးသာ ဝတ်တတ်စားတတ်သော်လည်း အလုပ်ထဲရောက်တော့ ကောက်ကြောင်းများ ထင်းထင်းပေါ်သော သူမတို့ရုံးရဲ့ ယူနီဖောင်း ကို ဝတ်ဆင်ရတော့သည်။ သူမ ကျောင်းတတ်နေစဉ်က သူမရဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် အင်္ကျီလေး ရင်ဟိုက်နေရင်ပင် သဝန်တိုတတ်တဲ့ ကျွန်တော် ခုတော့ သူရဲ့ရုံးအဝတ်အစားနဲ့ ပုံစံလေးကို ရင်ခုန်ကာနေတတ်ခဲ့ပြီး ။ ကျွန်တော်နဲ့ နွယ်က အချစ်ကို တန်ဖိုးထားတတ် သူတွေမို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရူးမူးကို ချစ်ခဲ့ကြသည်။
ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်တော်တို့ ချစ်သူ သက်တမ်း နှစ်နှစ်ပြည့်ခါနီးမှာပဲ အတူတူနေကြာ စည်းကျော်ခဲ့ကြသည်။ နွယ်က လွယ်လွယ်ကူကူနှင့်တော့ လက်ခံခဲ့သည်မဟုတ် သူမနှင့် ကျွန်တော်ရဲ့ အချစ်တွေကို အပြည့်အဝ ယုံကြည်ခဲ့လို့သာ လက်ခံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုးရိုး အေးအေး နေတတ်တဲ့ သူမနှင့် အတူတူနေရတာလဲ ကလေးကို မုန့်ပေးကြိုက်ရသလို အားလုံးကို သင်ပြကာနေရသည်။ ထိုအချက်ကလဲ ကျွန်တော့်အတွက် ကံကောင်းသလိုလို။ “ကို စောင့်နေရတာ ကြာပြီလား နွယ်ကရေချိုးတာနည်းနည်း နောက်ကျသွားတယ်” ကျွန်တော် စောင့်နေစဉ်မှာပဲ နွယ်တစ်ယောက် ကျွန်တော်ရှိတဲ့ နားသို့ ရောက်လာသည်။ “မကြာသေးပါဘူးကွ ကိုလဲ စောစောလေးကမှ ရောက်တာ” ကျွန်တော်စကားပြောကာပြုံးပြရင်း နွယ်ကို သေချာကြည့်လိုက်မိသည်။ ကျွန်တော်ရဲ့ အလှပဂေးလေးနွယ် ဒီနေ့အရမ်းကို ဆက်ဆီစ် ဖြစ်လှသည်။ ကျောင်းတတ်နေတုန်းကနွယ်နဲ့ ခုနွယ်နဲ့ သြော် တစ်ခြားသူကို ပြောပြရင် ယုံပါ့မလားနွယ်ရယ်။ နွယ်က ဒေါက်ဖနပ်အမြင့်လေးနဲ့မို့ နွယ်ရဲ့ တင်သားများ ပင်ထင်ထားသလိုဖြစ်ကာ အရင်ကထက်ပိုကာ ကားထွက်နေသည်။
အင်္ကျီကတော့ ပေါင်လည်လောက်ထိရောက်တဲ့ အသားကပ်အရည်လေးနဲ့ ကျွန်တော်စွဲလမ်းရတဲ့အပြုံးလေးကို ပြုံးလို့ တခြားသူများမြင်ရင် ကျွန်တော်ရဲ့နွယ်ကို မငေးပဲ နေမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ “ကိုတို့ ဘယ်သွားကြမလဲ နွယ် ” “ခုခဏလေး ဈေးဝယ်ထွက်မယ် ထွက်မယ် မုန့်စားမယ် ပြီးရင်တော့ ကို့သဘော ” မချိပြုံးလေးပြုံးပြတဲ့နွယ်ကို ကျွန်တော် ကိုက်စားချင်စိတ်ပါပေါက်သွားသည်။ ကျွန်တော်လည်း နွယ်လက်ကို တွဲကား နွယ်လိုအပ်တာလေးများကို လိုက်ဝယ်ပေးရင်း ဘေးကိုလည်း တစ်ချက်တစ်ချက် လိုကြည့်မိသည်။ အတွဲတော်တော်များများရဲ့ ကောင်းလေးတွေက နွယ့်ကို လိုက်မကြည့်သူမရှိလောက်အောင်ပင်။ ကျွန်တော်နဲ့နွယ်လဲ လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်ပြီး အရင်နေ့ထဲက ကြိုယူထားသော ဟိုတယ်သို့ ခေါ်ခဲ့လိုက်သည်။ အခန်းထဲရောက်တာ နဲ့ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘဲ နွယ့်ကို ဖက်ကာ နောက်မှနေပြီး စကားကပ်ပြောလိုက်သည်။ “နွယ် ကုတင်ပေါ်ကို လက်ထောက်ပြီး ကုန်းလိုက်” နွယ်က ကျွန်တော့်ကို မျက်စောင်းလေးထိုးကာ ကြည့်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကို လက်ထောက်ကာ ကုန်းလိုက်သည်။ ကျွန်တော်လဲ မေသက်နွယ်နောက်မှာ ဒူးထောက်လိုက်ပြီး မေသက်နွယ် အင်္ကျီလေးကို ခါးထိလှန်တင်လိုက်သည်။
အောက်တွင်တော့ ပင်တီ လေးနဲ့ လုံးဝန်းနေသော အိုးလေးက အသင့်ရှိနေသည်။ ပင်တီ လေးကို ဒူးလောက်ထိ ချွတ်ချပြီးမှ အိုးလေးကိုဖြဲကာ အရည်လေးများစိမ့်ထွက်နေသော စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို ယက်ပေးလိုက်သည်။ နွယ်တစ်ချက်တွန့်သွားပြီးမှာ အိုးကို အရင်ကထက်ပို ကောက်ပေးလာသည်။ “အင်း… အင်း….” စောက်ရည် နံလေးသင်းပြီး ဆက်ဆီစ် ကျနေသော နွယ့်ကြောင့် ကျွန်တော့်လီးက ဘောင်းဘီးအတွင်းမှာ တင်းတောင်ကာ နေသည်။ ကျွန်တော်လဲ နွယ် စောက်ဖုတ်လေးကို ယက်ပေးလိုက် စောက်စိလေးကို ရှာနဲ့ ထိုးမွှေလိုက်နှင့် လျှာစွမ်းပြပေးလိုက်သည်။ ထိုချိန် ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီ အိတ်ကပ်ထဲက ဖုန်းက ထမြည်လာသည်။ “ရောက်နေပြီလား တတ်ခဲ့လိုက်လေ ကျွန်တော်က ဒုထိယထပ်က အခန်း ၂၀၃ မှာ ” ဖုန်းပြောအပြီး နွယ့်စောက်ဖုတ်လေးကို ပြန်အယက်မှာ စောစောကထက်ပိုပြီး အရည်များပိုစိမ့်နေသည်။ ဒါကို သိသွားတဲ့နွယ်က ပေါက်နှစ်ချောင်းကိုလိမ်ကာ စောက်ဖုတ်လေးကို ယက်မရတော့အောင် လုပ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်လဲ နွယ်ခါးလေးကို ကိုင်ကာ နှိပ့်ချလိုက်ပြီးမှ နောက်သို့ ပြူးထွက်လာသော စောက်ဖုတ်းလေးကို ပြန်ယက်လိုက်သည်။
“ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက်” “ဝင်ခဲ့အကိုရေ ပြီးရင်တော့ လော့ ချလိုက်” ကျွန်တော်စကားမဆုံးခင်မှာပဲ အသားညိုညို ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှင့် လူတစ်ယောက် အခန်းထဲသို့ ဝင်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီး ပြုံးနေသော သူ့ကို “အကိုပါ ဝင်နွဲလိုက်တော့လေ” လို့ပြောပြီး နွယ်စောက်ဖုတ်ကို ပြန်ယက်နေလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်လီးရော နထင်သွေးတွေရော တစ်ဒုတ်ဒုတ်နှင့် စီးဆင်းနေပြီဖြစ်သည်။ နွယ်ကတော့ ကုတင်ပေါ်တွင် မျက်နာကို အပ်ထားသည်။ ဖေ့ဘွတ်အကောင့်နာမည် အရ အောင်ကြီး ဆိုသူက ကျွန်တော်စကား ကြားပြီသည်နှင့် သူရဲ့ဘောင်းဘီခပ်ပွပွကို ချွတ်လိုက်ပြီး အပေါ်ကတော့ တီရှပ် အင်္ကျီလေး ကျန်နေသေးသည်။ ပြီးမှ နွယ့်ရှေ့ကို သွားကာ သူရဲ့ ဂေါ်လီလီးမဲမဲကြီးကို နွယ်နှုတ်ခမ်းနှင့် တေ့ပေးလိုက်သည်။ နွယ်က ရုန်းမလို ဟန်ပြင်ချိန်တွင် ကိုအောင်ကြီးက ခေါင်းကိုကိုင်ကာထိန်းပေးလိုက်သည်။ နွယ်နဲ့ ကျွန်တော် တူတူနေတဲ့သက်တမ်းကြာလာသည်နှင့်အမျှ အသစ်အဆန်းများကို စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်ကအရင်ထဲက ကပ်ကိုးဆိုသော အမှောင်စိတ်အပေါ်ကို စွဲလမ်းခဲ့သည်။ နွယ်နဲ့တွေ့တော့ ထိုအရာက ပျောက်သွားပြီဟုထင်တာ တကယ်တော့မပျောက် ကျွန်တော့်ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာ ထိုအရာကို စွဲလမ်းနေသေးသည်။
နောက်ပိုင်း နွယ်နှင့် တူတူနေလာပြီးတဲ့နောက် နွယ်ကို ပြောင်းလဲကာ ပေးလိုက်မိသည်ပုံမှာ (ဟော့ဝိုက်စ်) ပုံစံဖြစ်နေပြီဆိုတာ နောက်မှသတိထားမိသည်။ ထိုချိန်မှ စပြီးစည်းရုံးခဲ့တာ ဒီနေ့က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်စောက်ဖုတ် ယက်ရင်း အတွေးလွန်သွားရာမှ ပြန်သထိထားမိချိန်တွင် နွယ်က ကိုအောင်ကြီးလီးကို အငမ်းမရ စုပ်ပေးနေပြီဖြစ်သည်။ နွယ်က ပေါင်လေးကို အရင်ကထွက်ပိုကားလာပြီး စောက်ဖုတ်လေးမှာလဲ ပွစိပွစိဖြစ်လာပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က စောက်ဖုတ်ယက်တာကို ရပ်လိုက်ချိန်တွင်တော့ ကိုအောင်ကြီးက ကုတင်ပေါ်က ဆင်းလာပြီး နွယ်နောက်တွင် နေရာဝင်ယူလိုက်သည်။ နွယ်ကတော့ စောစောက လီးစုပ်ပေးနေသည်မှာ သူမ မဟုတ်တဲ့အတိုင်း ခေါင်းကို မွေ့ယာနှင့်ကပ်ကာ ငုံ့နေသည်။ “ဖြန်း…… ဖြန်း….” “အာ့…….. အာ့…………” ကိုအောင်ကြီးက နွယ်နောက်မှနေရာယူပြီး အိုးလေးနှစ်ဖက်ကို တစ်ဖက်တစ်ချက်ရိုက်ကာ နွယ်စောက်စိလေးကို လက်နှင့် ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးမှ တောင်ထနေသော ဂေါ်လီ အဖူးအဖူးများနှင့် လီးကြီးကို နွယ် စောက်ဖုတ်လေးထဲကို တဖြည်းဖြည်း ထည့်သွင်းလိုက်သည်။
ကျွန်တော်လဲ ချက်ချင်းဘဲ ဘောင်းဘီထဲမှ ဖုန်းကို ထုတ်ကာ ဗီဒရို ရိုက်လိုက်သည်။ နွယ်ကတော့ အိပ့်ယာခင်းများကို စုပ်ကိုင်ရင်း ခေါင်းထောင်ကာ ညည်းလိုက်ရသည်။ ကိုအောင်ကြီးက လီးအဆုံးထိသွင်းပြီးမှ ဘာမှဆက်မလုပ်ဘဲ နွယ်စောက်ဖုတ်လေးကို လက်နှိုက်ကာ အစိလေးအား ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ နွယ်ကတော့ လီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်ပြီး အစိပွတ်ခံရတဲ့ဖီလ်းကတော့ ဘယ်လိုရယ်မသိ ကျွန်တော်မှာတော့ ကြက်သီးမွှေးတွေတောင် ထသွားသည်။ နွယ်စောက်ဖုတ်လေး အရင်ကထက်အရည်ထွက်လာမှ နောက်မှ တစ်ချက်ချင်းစောင့်ကာလိုးတော့သည်။ နွယ်ကတော့ လီးအရသာ အသစ်ကိုခံစားရင်း ညည်းသံများက အသဲခိုက်လှသည်။ “အား…. အား….. အား…” “ဗြစ်…ဗြစ်…. ဗြစ်…. ဗြစ်…” ဒီတိုင်းလိုင်းရင် အသံမထွက်သော နွယ် စောက်ဖုတ်လေးမှာ ဂေါ်လီတွေပါနေသော လီးမဲမဲကြီးကောင် အသံတွေအစိအရီထွက်လာသည်။ ကျွန်တော်လဲ ကိုအောင်ကြီးလိုးနေသော နေရာနောက်မှနေပြီး နွယ် စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လီးဝင်ထွက်နေပုံများကို မှတ်တမ်းယူငါလိုက်ရိုက်နေလိုက်သည်။ ကိုအောင်ကြီးက နွယ်အင်္ကျီလေးကို ကျောမှဇစ်ဖြုတ်ပြီး အောက်သို့ဆွဲချလိုက်သည်။ ဘော်လီမဝတ်ဘဲ တင်းရင်းနေသော နွယ်နို့လေးများက ချက်ချင်း ခုန်ထွက်လာသည်။ နောက်မှ ကပ်လိုးရင်း နို့သီးခေါင်းလေးများကို လှမ်းကာချေပေးနေသည်။
“အား…. အား….. အား…” “ကို မျက်နာမရိုက်နဲ့လေ….. အား…အား…” “နောက်ကျရင် ပြန်ကြည့်ရအောင်လို့ကာကွ” နွယ်ကခေါင်းကို ကုတင်နှင့်အပ်ခါရှောင်သော်လည်း ကိုအောင်ကြီးက နွယ်ကို ဆံပင်ဆဲပြီးနောက်မှ လိုးလိုက်သောကြောင့် ခေါင်းမော့ လာရသည်။ နွယ်မှာ ကာမစိတ်များတတ်ကာ မွန်နေပြီးမှာ မျက်နာတစ်ခုလုံး ရဲတတ်ကာနေသည်။ ထိုနောက်မှာ ကိုအောင်ကြီးက လီးကို စောက်ဖုတ်ထဲက ချွတ်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်တတ်ကာအိပ့်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်လဲ ကင်မရာ ကို မှတ်တင်ခုံပေါ်တွင် တင်ကာ သူတို့လိုးနေပုံများကို ရိုက်ရင်း ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ မချွတ်လို့လဲမရ ကိုအောင်ကြီးနှင့် နွယ် လိုးပုံများကိုကြည့်ရင်း လီးက အသာကုန်တောင်နေသောကြောင့် နာလာသည်။ ပြွတ်…. ပြွတ်…… ပြွတ်…… ပြွတ်….. နွယ်က ကိုအောင်ကြီးပေါ်သို့မတတ်ဘဲ ဘေးမှကုန်းကာ လီးကို စုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုအောင်ကြီးကလဲ မေသက်နွယ်ခေါင်းကို ထိန်းကာ အောင်မှကော့ကော့ပေးနေသည်။ ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့နွယ်လေးမှာ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးမှ ခုတော့ ဘယ်သူမှ လိုက်မမှီတဲ့ (ဟော့ဝိုက်) ဖြစ်နေချေပြီ။ ခဏအကြာမှ နွယ်က ကိုအောင်ကြီးပေါ်သို့တတ်ကာ လီးကို သူမလိုက်နှင့်ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ထည့်ကာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ ပြီးမှ ကိုအောင်ကြီးအပေါ်သို့ လက်ထောက်ကာ ဆောင့်လိုးတော့သည်။
အား…. အား… အား.. ဗြစ်… ဗြစ်….ဗြစ်…ဗြစ်..ဗြစ်…. .. ဖြန်း….. ဖြန်း….. နွယ်လေးနောက်မှနေပြီး ကျွန်တော်လဲ ဗီဒရို ရိုက်ရင်း ထုရတော့သည်။ ကိုအောင်ကြီးက နွယ်လေးအရှိန်ကျသွားသည်နှင့် ဖင်လုံးကြီး နှစ်ဖက်ကို ရိုက်ကာ အရှိန်တင်ကာ လိုးခိုင်းသည်။ နွယ်ကတော့ ကိုအောင်ကြီးရိုက်လိုက်တိုင်း ပိုအိကာဆောင့်လိုးသည်။ ကိုအောင်ကြီးက နွယ်နို့သီးခေါင်းလေးများကိုလည်း အနားမနေရအောင ချေနေနေသည်။ ခုမှ တကယ့် ကျွန်တော့်ဖာသည်မလေး နွယ်ဖြစ်တော့တာဟု တွေးလိုက်မသည်။ ကျွန်တော်လဲ ဗီဒရို ရိုက်ရင်း ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ နွယ့်အိုးလေးပေါ်တွင် လရည်များကို ထုချကာ ပြီးလိုက်တော့သည်။ နွယ်လဲ ကိုအောင်ကြီး ပေါ်တွင် အဆက်မပျက်ဆောင့်ကာ လီးအဖျားထိ ထုတ်ကာ ဆောင့်ရင်း လီးနဲ့ စောက်ဖုတ် ကျွတ်သွားသောချိန်တွင် နွယ်လေးပြီးသွားသည်။ စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးကျွတ်သွားချိန်တွင် ပြီးသွားသောကြောင့် နွယ်စောက်ဖုတ်လေးကို အတိုင်းသားမြင်နေရသည်။ နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘဲ အတွင်းသားများပေါ်နေပြီး စောက်ဖုတ်လေးမှာလဲ အခေါင်းပေါက်လေး ဖြစ်ကာနေသည်။
ထိုအခေါင်းပေါက်နှင့် စောက်ဖုတ်လေး ညှစ်ကာညှစ်ကာ ပြီးနေပုံမှာ ကျွန်တော့်လီးပင် ပြန်တောင်လာသည်။ ခဏကြာပြီးမှာ နွယ်ကို ကုတင်ပေါ်သို့လည်းချလိုက်ပြီး နွယ့်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို တမ်းကာအပေါ်မှ စောင့်လို့းလိုက်သည်။ ကိုအောင်ကြီးလိုးချက်များမှာ လဲ အကြမ်းဆုံးဖြစ်ပြီး နွယ်ရဲ့ ငယ်သံပါအောင်အော်ပုံမှာလဲ အကျယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အချက်ပေါင်းတော်တော်များများ လိုးပြီးမှ နွယ့်စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ ဆောင့်ဆောင့်ထည်ကာ လရည်များကို ပန်းထည့်လိုက်သည်။ ပြီးမှလီးကို နှုတ်လိုက်ချိန်တွင် နွယ်စောက်ဖုတ်ထဲမှ လရည်များ အံကာရှုန်ထွက်လာပြီး နွယ်လေးလဲ ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နှင့် ဖလပ်ပြသွားသည်။ ကျွန်တော်နဲ့ကိုအောင်ကြီးလဲ နွယ်လေးရဲ့ တစ်ဖက်တချက်တွင် ဝင်ကာအိပ့်လိုက်သည်။ “ဘယ်လိုလဲ ညီလေး အဆင်ပြေရဲ့လား…..” “သိပ့်ပြေတာပေါ့အကိုရာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပထမဆုံး အတွေအကြုံကတော့အားအရဆုံးပဲ” “ဟား….. ဟား….” “ငါ့ညီလိုအပ်သေးရင် အပြင်မှာ နှစ်ယောက်ကျန်သေးတယ် ဘယ်လိုလဲ” “နွယ်လေး အဆင်ပြေရင် ကျွန်တော်ကတော့ပိုကြိုက်တာပေါ့ဗျာ” “ဘယ်လိုလဲ နွယ်လေး အကိုထပ်ခေါ်ပေးရမလား” “ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးကတော့ အဆုံးစွန်ဆုံးထိ သွားချင်တယ် ခေါ်လိုက်လေ…… ဒါပေမဲ့ခဏနော် နွယ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ဦးမယ်” “အိုကေ လေ အတာဆို အကိုခဏ အောက်ဆင်းလိုက်ဦးမယ်” ကိုအောင်ကြီးက ပြောပြီးသည်နှင့် အဝတ်အစားများဝတ်ကာ အောက်သို့ဆင်းသွားသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ နွယ်လေးအင်္ကျီတွေကို အကုန်ချွတ်ပေးလိုက်ပြီး နွယ်လေးရဲ့ ကိုအောင်ကြီးလိုးထားသော စောက်ဖုတ်လေးကို ယက်လိုက်သည်။ တစ်ခြားတစ်ယောက်ရဲ့ လရည်နံ့များလှိုင်ထနေသော ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို ယက်ရသည်မှာ (ကပ်ကိုး)ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပြီးမှရေချိုးခန်းထဲဝင်ကာ နွယ်ကို သန်စင်ပေးရင်း နှစ်ယောက်တူတူနေချိုးလိုက်ကြသည်။ ကိုအောင်ကြီးနှင့် သူ့လူနှစ်ယောက် နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင် ပြန်ရောက်လာသည်။ နှစ်ယောက်လုံးက ကိုအောင်ကြီး လိုပင် အသားညိုညို ခပ်တောင့်တောင့်တွေချည်းဖြစ်သည်။ “ဆောရီး ညီ ကိုတို့တစ်ခွက်တစ်ဖလားလောက် ချနေလို့” “ရပါတယ်အကိုရဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်” နွယ်က ရေချိုးတစ်ဘက်လေးကို ပတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာချိန်တွင် ကိုအောင်ကြီးလူနှစ်ယောက်မှာ စားမတတ်ဝါးမတတ် နွယ်အားကြည့်ကြသည်။ “အကိုမိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ် သူတို့ကအကိုရဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်း တွေ ဒီကောင်က မိုးကြီးတဲ့ ဒီကောင်ကတော့ ဇော်ကြီးတဲ့ နာမည်အရင်းတွေကတော့မလိုအပ်ဘူးထင်တယ် ဟုတ်တယ်မို့လား” ကိုအောင်ကြီးက မိုးကြီးဆိုတဲ့အရပ်ခပ်ပျက်ပျက်တစ်ယောက် ဇော်ကြီးဆိုတဲ့ ကိုအောင်ကြီးနဲ့ မိုးကြီးလောက် အသားမညိုတဲ့တစ်ယောက်နှင်မိတ်ဆက်ပေးသည်။
ကျွန်တော်နဲ့နွယ်လဲ ခေါင်းပဲညိမ့်ပြလိုက်သည်။ “ညီလေး… အကို နွယ့်ကို ဆေးတစ်မျိုးတိုက်ချင်တယ် သူ့အတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ ဘယ်လိုလဲ” ကိုအောင်ကြီးက ကျွန်တော်ပုခုံးကိုလာဖက်ပြီးပြောသည်။ “လူကို အန္တရာယ် မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ရပါတယ် ” “အိုကေ အတာဆိုလဲ စလိုက်ကြရအောင် ” ကိုအောင်ကြီးက သူတို့ပါလာသောအိတ်ထဲက အရက်ပုလင်းလိုအရာထဲကရေနှင့် ဆေးလုံးတစ်လုံးတိုက်လိုက်သည်။ပြီးမှ ကိုအောင်ကြီးတို့က ထိုပုလင်းထဲကအရည်ကို သုံးယောက်မျှသောက်ကြသည်။ နွယ်ကတော့ဆေးသောက်ပြီး ကျွန်တော့်ပေါ်တတ်ထိုင်နေသည်။ ကျွန်တော်လဲ နွယ်ပေါင်လေးအားပွတ်ပေးနေလိုက်သည်။ ကိုအောင်ကြီးတို့အဖွဲ့က လုပ်စရာရှိတာလုပ်ပြီးသည်နှင့် တကိုယ်လုံး ချွတ်ကာ သူတို့ရဲ့ ဂေါ်လီလီးကြီးတွေကို ထလာစေရန် ဂွင်စတိုက်ကြသည်။ သူတို့အားလုံး တူညီတာကတော့ လီးကြီးတွေကမဲနေပြီး အားလုံး ဂေါ်လီတွေနှင်ကြီးဖြစ်သည်။ နွယ် တစ်ယောက် သူတို့ လီးကြီးတွေကိုကြည့်ပြီး ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုလိမ်ကျစ်ကာ ကာမစိတ်များတတ်လာသည်။ သေချာတာကတော့ ဆေးစွမ်းရောလူစွမ်းရောပြ ပြီထင်သည်။ မေသက်နွယ်က ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်ကဆင်းသွားပြီး ထိုလူသုံးယောက်နားသွားကာ လီးကြီးတွေကိုအငမ်းမရ စုပ်တော့သည်။ ကျွန်တော်လဲနောက်တစ်ကြိမ် ဖုန်းကို ထုတ်ကာ ဗီဒရို စတင်ရိုက်လိုက်သည်။ “ကောင်းလိုက်တဲ့စုပ်ချက်တွေကာ ကျစ်” မိုးကြီးဆိုသူရဲ့ လီးကြီးကို အငမ်းမရစုပ်ကာ အောင်ကြီးနှင့် ဇော်ကြီးလီးကိုလည်းပိုင်ကာစွပေးနေသည်။
ကျွန်တော်နွယ်နောက်ကိုသွားကာ စောက်ဖုတ်လေးကို အနီးကပ်ရိုက်လိုက်ချိန်တွင် နွယ်စောက်ဖုတ်ထဲမှစောက်ရည်များလျှံထွက်ကာနေသည်။ နွယ်ကတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင် ဆက်တိုက်စုပ်နေသည်။ “ငါမရတော့ဘူးကွာ ချချင်နေပြီ” ကိုဇော်ကြီးက ပြောပြောဆို နွယ့်ကို မတ်တပ်ရပ်ကုန်းခိုက်းကာ နောက်မှနေပြီး စလိုးတော့သည်။ ကိုဇော်ကြီးကလိုးသည်နှင့် အချက်မှမနားဘဲ ဆက်တိုက် နွယ်စောက်ဖုတ်လေးကို ဖွာထွက်သွားအောင် ဆောင့်လိုးတော့သည်။ နွယ်ကတော့ ဖီးတတ်နေသောပုံနှင့် ရှေ့ကလီးနှစ်ချောင်းကိုလည်း အစုပ်မပျက်ဘဲညည်းနေသည်။ ကိုဇော်ကြီးက အတော်မောသွားမှအရှိန်ရှော့ပြီး နွယ့် စအိုလေးအား လက်တစ်ချောင်းထည့်ကာ စမွှေသည်။ နွယ်မှာ ကျွန်တော်နှင့်လိုးစဉ်ထဲက ဖင်လိုးထားသောကြောင့် သိပ့်တော့မမှု့ပေ။ သို့သော် ဂေါ်လီလီးနှင့်လိုးလျှင်ဖင်ကွဲမည်ကတော့ သေချာသည်။
“အင်း… အင်း…. အင်း…” “မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား” မိုးကြီးက ဇော်ကြီးကိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ “အတွေ့ကြုံရှိပြီသားကွ အေးဆေးပဲ” “အတာဆို စလိုက်ကြရအောင်လေ” မိုးကြီးနှင့် ဇော်ကြီး အတိုင်ဖောက်ညီညီပြောဆိုပြီး မိုးကြီးက ကုတင်ပေါ်လို့ ပက်လက်လှန်အိပ့်လိုက်သည်။ ဇော်ကြီးကလဲ နွယ်စောက်စောက်ဖုတ်ထဲမှလီးကိုနှုတ်ကာ မိုးကြီးပေါ်ကိုတတ်လိုးရန်ပြောလိုက်သည်။ နွယ်က မိုးကြီးလီးကို ကိုယ်တိုင်ကိုင်ကာ ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ အရင်ကနွယ်နှင့်တခြားစီ ကာမခံစားမှုကို သာသိသော နွယ်ဖြစ်နေခြေပြီး ကျွန်တော့်ချစ်သူလေးကို လူထွားကြီးသုံးယောက်ဝိုင်းဖြုတ်နေပုံကိုကြည့်ရင်း လီးထိပ့်မှ အရည်ကြည်လေးများစုလာသည်။ ထိုနောက်မှ ဇော်ကြီးက အသင့်ယူလာသော ချယ်ဘူးဖြင့် သူ့လီးကြီးကိုလိမ်းပြီး နွယ့်စအိုဝလေးကိုလည်းသုတ်လိမ်းပေးလိုက်သည်။ ပြီးမှာနွယ်အိုးကိုကိုင်ကာထိန်းလိုက်ပြိး လီးကြီးကို ဖင်ပေါက်လေးထဲသို့ ဖိကာ ထည့်သွင်းလိုက်သည်။
ဒီတခါတွင်တော့ နွယ်အော်ရတော့သည်။ မိုးကြီးက အောက်ကနေပြီ နွယ်နို့သီးလေးများကို ချေပေးလိုက်သည်။ နွယ်တစ်ယောက် မျက်ရည်များပင် ကျလာသည်။ တခြားယောက်ျားကြီးနှစ်ယောက်က နွယ်အားလိုးနေပုံကိုကြည့်ရင် လရည်များပင်ထွက်ချင်လာသည်။ ခဏကြာတော့ နွယ်တို့သုံးသောက် စီချက်ညီ အတိုင်ဖောက်ညီလာကြသည်။ ထိုချိန်မှ ကိုအောင်ကြီးက ကုတင်ပေါ်တတ်သွားပြီး နွယ်ပါးစပ်ပေးကို စတင်ကာလိုးတော့သည်။ အခန်းတစ်ခန်းလုံး လိုးသံတွေက ဆူညံနေပြီး လီးနှင့်စောက်ဖုတ်ရိုက်သံတွေ လဥနှင်ဖင်ရိုက်သံတွေ လည်ချောင်းထဲက ညည်းသံတွေကြောင့် ကျွန်တော့်လီးမှလရည်များ သူ့အလိုလို အားပြင်းမာန်ပြင်း ထွက်ကြလာတော့သည်။ မေသက်နွယ် (ကျွန်တော်ရဲ့နွယ်) ဘယ်ချိန်ထိ ထိုအသံတွေနဲ့ ဆူညံနေဦးမယ်မသိ။ ကျွန်တော်ကျွေးတဲ့ ချောကလပ်ချောင်းတွေ သူမတစ်ဘဝလုံးမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေမှာ သေချာနေပြီ။ ကျွန်တော့်လီးထိပ်မှာက လရည်တွေ တသင်သွင်စီးရင်းပေါ့။ ပြီးပါပြီ….။